မျှစ်ကြော်ပြုံး နှင့် ကိုကိုဇင် အင်တာဗျူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » မျှစ်ကြော်ပြုံး နှင့် ကိုကိုဇင် အင်တာဗျူး	19
Posted by ၀င့်ပြုံးမြင့် on Nov 2, 2016 in Creative Writing | 19 comments
ကိုကိုဇင် – အစ်မကြီးမျှစ်ကြော် နေကောင်းပါရဲ့လား ခင်ဗျာ။
မျှစ်ကြော်ပြုံး – ဒေါင်ဒေါင်မြည် ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ အိုးတွေအတွက် မဟုတ်ရပါဘူး။
ကိုကိုဇင် – ခင်ဗျာ . . .
မျှစ် – ဒေါင်ဒေါင်မြည် ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ မျှစ်မမ ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် တီထွင်ပေးထားရတဲ့ စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။
ကိုကိုဇင် – အစ်မကြီး ခုတလော ပိန်သလားလို့။ ၀ိတ်ချနေတာလား။
မျှစ် – အို . . . အနုပညာအတွက်ဆိုရင် အရိုးကျေကျေ အရည်ခန်းခန်း အသည်းကျွမ်းကျွမ်း . . .
ကိုကိုဇင် – အစ်မကြီးရဲ့ စာတွေဟာ အနုပညာ သဘော သိပ်မြောက်တယ်နော်။ အနုပညာဆိုတာကို အစ်မ ဘယ်လို ၇ှုမြင်ထားပါသလဲ။
မျှစ် – စူပါစာရေးဆရာမ တစ်ယောက်ကတော့ ပြောဖူးပါတယ်။ အနုပညာဆိုတာ လှပတဲ့ လိမ်ညာမှုလေးပါ တဲ့။ အစ်မအတွက် ကတော့ မရှိမဖြစ် ဓာတ်စာ။ မျှစ်မ ရဲ့ သွေးထဲမှာ အနုပညာပိုးတွေ စီးမျောနေတော့ကော လောကကြီးကို အပြစ်တင်ရမှာလား။
ကိုကိုဇင် – အစ်မကြီးမှာ အနုပညာမျိုးရိုး ပါပါသလား။
မျှစ် – အိုး ပါပါပြီကော။
ကိုကိုဇင် – ဒါဆိုရင် အနုပညာဆိုတာ မျိုးရိုးပါမှ အောင်မြင်တာလား။ မပါရင်ကော မအောင်မြင်ဘူးလား။ လူငယ်တွေကို အစ်မမျှစ် အနေနဲ့ ဘာများ ပြောချင်ပါသလဲ။
မျှစ် – မျှစ်မ ပြောချင်တာကတော့ အနုပညာဆိုတာ ကံနဲ့လည်း ဆိုင်တယ်။ စန်းနဲ့လည်း ဆိုင်တယ်။ တချို့ သိပ်ကြိုးစားတယ်။ ဒါပေမယ့် အတိတ်ဘ၀က ကံမပါလာဘူး။ ဒီတော့ စန်းအားနည်းတယ်။ အဲဒီအခါ အနုပညာမှာ ထင်တိုင်းမပေါက်ဘူး။ တချို့ကတော့ အထူးတလည် မကြိုးစားဘဲနဲ့ ဟပ်ချလောင်း ဆိုပြီး အောင်မြင်သွားတယ်။ အဲဒီလို လူမျိုးက လွယ်လွယ်နဲ့ အောင်မြင်သွားတော့ အောင် မြင်မှုကို တန်ဖိုးမထားဘူး။ အဲဒီအခါ ကံရှိသရွေ့ စန်းရှိသရွေ့တော့ အိုကေနေမယ်။ တာဝေးအတွက်တော့ မပြောတတ်ဘူး။ ကြိုးစားပြီး အောင်မြင်လာတဲ့ လူအဖို့ကတော့ အောင်မြင်မှုကို ကြာကြာ ထိန်းထားနိုင်တယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အောင်မြင်လာချိန်မှာ ဘ၀မမေ့သင့်ဘူး။ ကျေးဇူးတရား မမေ့သင့်ဘူး။ အဲဒီလို စိတ်မျိုး မွေးဖို့ အစ်မ အမြဲဆုံးမတယ်။ ကျေးဇူးတရား မမေ့ရဘူး။ တခြားမကြည့်နဲ့။ အစ်မကိုပဲ ကြည့်။ (ဗေထိ . . .)
ကိုကိုမျှစ် – အစ်မ ဒီအနေအထားကို ရောက်လာခဲ့တာမှာ ဘယ်သူ့ကျေးဇူးတွေ ရှိပါသလဲ။
မျှစ် – ဖေဖေ မေမေ၊ ဦးဦး၊ ဒေါ်ဒေါ်၊ ကိုကို၊ မမ တို့အပြင် မျှစ်မရဲ့ ပါရမီ ဖြည့်ဖက်ကြီးကိုလည်း ဘယ်ချန်ထားလို့ ရမလဲ။ ပြီးတော့ မျှစ်မရဲ့ သားနဲ့ သမီး ကျေးဇူးလည်း ပါတာပေါ့။ ကျေးဇူးဆိုတာ တင်တတ်ရင် ရသကွဲ့။ သူတို့လေးတွေကြောင့် ခွန်အားတွေ တိုးတယ်ကွယ်။
ကိုကိုဇင် – ခင်ပွန်းကြီး ဆယ်ပါးဆိုတာကကော အစ်မ။
မျှစ် – ခင်ပွန်းကြီး ဆယ်ပါး ဆိုတာ ခင်ပွန်းလေးတစ်ပါးရှိတယ်လို့ ပြောတာလားဟင်။
ကိုကိုဇင် – အစ်မမျှစ်ရဲ့ ကျေးဇူးသိတတ်မှုအပေါ် သိပ်ပြီး အံ့သြ ၀မ်းသာမိပါတယ်။ အဖေ အမေရဲ့ အမွေကို ရထားတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစ်မရဲ့ ရပ်တည်မှုမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကလည်း အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စွမ်းအားတွေ၊ ဖန်တီးလိုစိတ်တွေ ကြံ့ခိုင်မှုတွေ အများကြီး တွေ့မြင်နေရပါတယ်။
မျှစ် – အဖေအမေ ရဲ့ အမွေကို ရတယ်ဆိုတာ အစ်မ ထင်တာကတော့ Genes ပေါ့နော်။ အဖေ့မှာ ပါတဲ့ စိတ်တွေ၊ အမေ့မှာ ပါတဲ့ စိတ်တွေကို အစ်မ အပြည့် ရခဲ့တယ်။ နိုင်ငံရေး အနုပညာပါ။ အမေ့ကြောင့် အစ်မ အလုပ်တွေ ပိုပြီး လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဖေ့ကြောင့် အစ်မ ခွန်အားတွေ အားကြီး အများကြီး ရှိခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ စာအုပ်တွေဖတ်ပြီး ကြံ့ခိုင်လာခဲ့တယ်။ အစ်မကလေ ၄ နှစ်သမီးကတည်းက ဆရာကြီး ပီမိုးနင်းစာအုပ်ဖတ်နေပါပြီ။ တက်ကျမ်းဟူသမျှ မလွတ်တမ်းဖတ်တယ်။ ကိုယ်ထူးကိုယ်ချွန် ဖြစ်လာအောင် ဒီစာအုပ်တွေက နည်းပေးလမ်းပြ လုပ်ခဲ့ပါတယ်ကွယ်။ ပညာရှိကြီးတွေရဲ့ အဆိုအမိန့် တွေဆို မျှစ်မတို့ သိပ်သိပ်ခိုက်။
ကိုကိုဇင် – အစ်မရဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့ ရပ်တည်ချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် . . .
မျှစ် – အို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အောင်မြင်တယ်လို့ မထင်သေးပါဘူး။ ကြိုးစားရဦးမှာပါ –
ကိုကိုဇင် – ဒီလိုလေ အစ်မရဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် အစ်မရပ်တည်တဲ့အခါ ရိုးသားမှုကို အခြေခံတယ်လို့ အားလုံးက ထင်မြင်ယူဆကြပါတယ်။ ရိုးသားမှု က အစ်မ ဘ၀ကို အများကြီး တန်ဖိုးတက်စေတယ်လို့ အစ်မ ထင်မြင်ယူဆပါသလား ခင်ဗျ။
မျှစ် – ယူဆတာပေါ့ကွယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ခေတ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ထက်တော်တဲ့ လူတွေ တစ်ပုံကြီး။ ဒါပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ရိုးသားမှုကို ဘယ်သူမှ မမီဘူး။ ဒါကြောင့် အစ်မကလေ ဗိုလ်ချုပ်ကို အမြဲနမူနာ ယူတယ်။ အစ်မက နဂိုကတည်းက ရိုးသားမှုကို အခြေခံထားတဲ့လူဆိုတော့ တကယ် လုပ်တဲ့ အခါမှာလည်း ကိုယ့်ထက်တော်သူ တတ်သူတွေနဲ့ ယှဉ်ပြောတဲ့အခါ လူကြီးတွေက လက်ခံပေးရပါတယ်။ အဓိက ကတော့ ယုံကြည်မှုဆိုတာ ရိုးသားမှုမှာ အခြေခံတာပါပဲ။ တခြားမကြည့်နဲ့။ မျှစ်မကိုပဲ ကြည့်။
ကိုကိုဇင် – ရိုးသားမှု ဆိုတာကို အရိုးရှင်းဆုံးလေး ဖွဲ့ဆိုပေးမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အစ်မကို ကျေးဇူးတင်နေရမှာပါ။
မျှစ် – ဟုတ်ကဲ့။ “ ရိုး” ဆိုတာက စမ်းချောင်းလေး တစ်မျိုးကို ပြောတာပါ။ အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် stream လုိ့ခေါ်ပါတယ်။ “သား” ဆိုတာကတော့ “son” ပါ။ ဒါကြောင့် ရိုးသားတယ်ဆိုတာ stream son လေး ဖြစ်တယ်လို့ ပြောတာပါ။ မောင်လေးတို့လည်း အမြဲပဲ စထရင်းစန်း လေး ဖြစ်အောင် နေရမယ်နော်။
ကိုကိုဇင် – သြော် ဟုတ်ကဲ့။ မှတ်သားနာယူစရာ ကောင်းလှပါတယ်။ ဒါနဲ့ အစ်မရဲ့ ဘာသာရေးအမြင်ကိုလည်း သိခွင့်ရရင် သိပါရစေခင်ဗျာ။
မျှစ် – ထေရ၀ါဒ သာသနာအစစ်ကို ကိုးကွယ်ခွင့် ရခဲ့တာဟာ အရည်းကြီးသာသနာ လက်အောက်ကို မရောက်ခဲ့လို့ပါ။ ဒါဟာ တစ်နိုင်ငံလုံး ကျယ် ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်သွားတဲ့ ရာဇ၀င်ပါ။ အခုဆိုရင် ကမ္ဘာမှာ ထေရ၀ါဒ စစ်စစ် ဆိုလို့ အစ်မတို့ မြန်မာပြည်ကြီးပဲ ရှိတော့တာလေ။ ဒါ ပိစိကွေးလေး မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ရှင်အရဟံကစပြီး အစ်မတို့ ဘုရားရှိခိုးပြီးရင်တောင် အနော်ရထာမင်းကို ကန်တော့ ရပါမယ်။
ကိုကိုဇင် – သြော် ဟုတ်ကဲ့။ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ မနာလိုစိတ်များတယ်လို့ တချို့က သတ်မှတ်လေ့ ရှိပါတယ်။ အစ်မရဲ့ အမြင်လေး သိပါရစေ။
မျှစ် – အဲဒီလို ထင်တတ်တဲ့လူတွေကိုလေ သိပ် သိပ်ပြီး သနားမိတာပဲ။ မတို့ မြန်မာဆိုတာက ခန္တီတရား လက်ကိုင်ထားတဲ့လူမျိုးပါ။ မနာလိုစိတ် ဆိုတာ ၀န်တိုတဲ့ စိတ်ကို ပြောတာပေါ့နော်။ ၀န်တိုတဲ့စိတ်ဆိုတာက မစ္ဆရိယ စိတ်ကို ပြောတာပေါ့နော်။ မစ္ဆရိယ ဆိုတာ ပါဒ် ဆင့်တွေ ပါတော့ ပါဠိ စကားလုံးပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ အရင်းစစ်တော့ အမြစ်မြေက ဆိုသလိုပဲ၊ ပါဠိ မှာသာ အပြစ်ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ မတို့ မြန်မာပြည်ကြီးဟာ မေတ္တာတွေ လွှမ်းခြုံထားတဲ့တိုင်းပြည်။ ပရဟိတသမားတွေ လုပ်စား – အဲလေ . ကြီးပွားတဲ့ တိုင်းပြည်၊ သူတော်ကောင်းတရားတွေ ပွားများစည်ပင်တဲ့ တိုင်းပြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်တွေက ဖော်ထုတ်ပေးရပါမယ်။ အဲဒါတွေ အတွက် အစ်မရဲ့ ဘ၀ကြီး တစ်ခုလုံးလုံးကို နှစ်မြုပ်ပြီး အနစ်နာခံ လုပ်ဆောင်သွားမှာပါကွယ် အဟင့်။
ကိုကိုဇင် – ဟုတ်ကဲ့။ အခုလို ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ။
kai says: မိုက်ကယ်မိုးကပြောတယ်..။
ထရမ့်ကိုရှုံးစေချင်ရင်.. Satire.. ခနဲ့ဟာသ နဲ့လုပ်မှရမယ်တဲ့..။
မြန်မာ့အရိုးစွဲ.. ရှေးစွန်းစွဲမှုကို ဖြေလျှော့စေချင်ရင်လည်း.. အဲဒီအတိုင်း… အခုအတိုင်း… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1350
၀င့်ပြုံးမြင့် says: အခုခေတ် အင်တာဗျူးတွေ ဖတ်ကြည့်။ အသေရီရတယ် သဂျီး။
kai says: အခုထရမ့်သမ္မတဖြစ်သွားပြီ…ဆိုတော့… မိုက်ကယ်မိုးဆက်ပြောတာ.. ဆက်ပြောမယ်..။
ဖိုးသာထူး says: ဒါက်ိုဖတ်ပြီးအတော်များများက သရော်စာလို့ထင်မှာမဟုတ်။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: တကယ်လားဟင်
ကျော်လွင်ဖြိုး says: ခုပဲ စာဖတ်ပြီး နောက်တော့မလို့
မြန်မာ အင်တာဗျူး တွေ ဖတ်တာ များသွားလား အန်တီပြုံး ဆိုပြီးတော့။
အဲ့ မော်ဒယ်တွေ မင်းသမီးတွေ အသံတောင် နားထဲ ပြန်ကြားမိ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: တီဗီဂိုက် ထဲက အင်တာဗျူးကို ဒီတိုင်းနီးပါး ရေးထည့်တာ။ တကယ်ပဲ ပြောခဲ့တယ်။ အနော်ရထာမင်းကို ရှိခိုးရမယ်တဲ့
Thint Aye Yeik says: ”တခြားမကြည့်နဲ့ မျှစ်မကိုပဲ ကြည့်”ဆိုတဲ့စကားက
အတိတ်ကောက်ပြီး ချဲ ထိုးအုန်းမှ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: သွက်သွက်ခါ သင့်အေးရိပ်သည် မကြာခဏဖောက်တတ်သော မျှစ်ကြော်ပြုံး၏ ပရိသတ်ဖြစ်သည်
တောတွင်းပျော် says: ဘုရား ဘုရား …
Arrr .. ခေါင်းမူးသွားပြီ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: မျှစ်ကြော်ဟာ ထာဝရ မျှစ်ချဉ်ပဲ။ မျှစ်ချဉ်ရဲ့ အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေကြီး ကိုတောကို ကျေးဇူးတွေ ဆယ်ကမ္ဘာတိုင်။ ( ခွိ … ဖားထားရတာ သူ့ကို)
Mr. MarGa says: အိုဘယ့် အင်တာဗျူးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1350
၀င့်ပြုံးမြင့် says: မကြာမီ သိကြားမင်းကြီးကို အင်တာဗျူးမည်
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: ဖတ်လို့ကောင်းတယ်..အရေးအသားကသွက်တယ်…ကြိုက်တယ်…
၀င့်ပြုံးမြင့် says: အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးသိပ်တင်ပါတယ် ဦးကြီးမိုက်ရေ။
သျှားသက်မာန် says: မိုက်တယ်
၀င့်ပြုံးမြင့် says: အားပေးတာ ကျေးကျေးပါညီမ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အင်းးးးး
၀င့်ပြုံးမြင့် says: တီဗီဂိုက် ထဲက အင်တာဗျူးကို ဒီတိုင်းနီးပါး ရေးထည့်ထားတာပါ လေးပေါက်။ တကယ့် အနုပညာသမား ဒိတ်ဒိတ်ကြဲတွေက အဲဒီလေအတိုင်းပြောသွားတာ။ သူတို့မှ သူတို့ပဲ။ အနောရထာမင်းကို ကန်တော့ရမယ်လို့လည်း ပြောသွားတယ်